लकडाउनले गर्दा महिला बिहानै ४ बजे देखि उठेर ४ पटक पुरुषलाइ खाना पकाएर खुवाउँदा थाके, हुन् थाले हैरान ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/लकडाउनले गर्दा महिला बिहानै ४ बजे देखि उठेर ४ पटक पुरुषलाइ खाना पकाएर खुवाउँदा थाके, हुन् थाले हैरान !
नेपालमा लकडाउन भएको २७ दिन पुग्यो । रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा बाहिरी जिल्लामा रहेकाहरु घर फर्किएका छन् । लकडाउनपछि अधिकां“शको घरमा पारिवारिक जमघट राम्रो छ । जमघटमा रमाइलो भए पनि महिलाको दैनिकी भने निकै व्यस्त भएको छ । महिलालाई घरको काम भ्याइनभ्याई भएको छ ।
छिमेकी मुलुकहरुको अव`स्था हेरेर लकडाउन खोल्ने/नखोल्ने विषयमा निर्णय हुन्छः सरकारका प्रवक्ता